5 Tips For Rokufambira By Train In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > 5 Tips For Rokufambira By Train In Europe
Ona uye ruzivo zvakawanda nokutanga on European muchitima ushingi. Achifamba nechitima mu Europe ndiyo nzira quintessential kuti achishanyira mishoni Europe hachizi chakavanzika nei. The njanji Network ndizvo dzakabudirira chaizvo saka vafambi vanogona kukunda Nyika dzakawanda uye tsika imwe rwendo rurefu rwokunoona. Sezvinongoita chero kufamba, zvakanaka yokugadzirira nechokwadi kuti une nyore uye kupfuura anakidze rwendo zvinobvira. Heano yedu 5 Mazano nokuti vaifamba nechitima mu Europe.
Kana You Travel Above 14 Days – Tsvakurudza siyana njanji pemipata
Kana uri kuronga kuona nyika dzakawanda paakanga achifamba nechitima mu Europe kungava kuchenjera kufunga bhizimisi ari Interrail Pass, kana chii vasiri EU vagari kudana Eurail. An Interrail Pass achaita yenyu chitima kufamba nyore. zvisinei, kana iwe uri munhu tighter bhajeti, munhu matikiti angashanda kunze isingadhuri (kunyanya kana uri kazhinji parwendo nechokumabvazuva Jerimani). Funga bhajeti yenyu uye kuita tsvakurudzo usati bhuku rako njanji zvichipfuura. Webhusaiti yedu saveatrain.com ndiyo nzvimbo akakwana kutanga kubatsira kuronga rwendo rwako muEurope.
Edza kuchengetera zvigaro zvenyu
chitima matikiti uye chigaro Reservations zvinhu zviviri zvakasiyana. A tikiti unokubvumira kukwira chitima, uye kuchengetedza anovimbisa kwauri chigaro pamusoro yakananga chitima. Before rwendo rwenyu nechokwadi iwe kunzwisisa kana chitima yako zvinoda, anokurudzira, kana haagamuchiri chigaro Reservations.
kana zvichibvira, edza kuchengetera chigaro chako, kunyanya kana uri kufamba munzvimbo ber dzakakurumbira munyika dzakadai Furanzi, Itari kana Speini. Nokuti vakawanda hwokufambira nechitima mu Europe, iwe havadikanwi kuchengetera chigaro chako, zvisinei, achikwira chitima uye vachitarisira zvakanakisa haisi pfungwa yakanaka. Unokwanisa kuudzwa kubuda kwenyu chigaro pemwedzi rwendo kana mumwe munhu akaita wakawandirwa izvozvo. By nzvimbo nzvimbo yako, unogona kusarudza uchida ane mukana kana hwindo chigaro. Unogona kugara shure uye tichinakirwa chitima tasva Kuziva musingadi kwaizombomiswa kutama.
Chengeta zvauinazvo njodzi
Achifamba nechitima mu Europe anozivikanwa somumwe zvikuru nzira kufamba. zvisinei, zvakakosha kuchengeta ziso nokuda pickpocketers, tichinyanyotarisa nezvitima kuti kurega mumaguta makuru. Usasiya mikwende yako unguarded muchitima kana iri chiteshi. On usiku nezvitima, kana uchida kurara, nechokwadi kuwana mukwende kuna rack duku bhasikoro zvechizarira. Kuti tive norugare rwepfungwa, kupfeka muchiuno rongedza pasi nguvo dzenyu kuchengeta pasipoti yako, runhare uye magwaro anokosha chero waidzivirira chero zvinogona mbavha.
Zvishoma zvakawanda – Mazano nokuti vaifamba nechitima mu Europe
kubva nyika kuti nyika kana guta neguta iri kunakidza chaizvo rwendo. zvisinei, rwendo anogona kuva zvinonetesa kana uri akatakura mutoro. Rongedzai zvinokosha uye kusiya chero zvinhu kana zvigadzirwa dzisina zvinodiwa shure.
Zvichienderana chitima yauri kufamba pamusoro, hapana mashoma okuchengetera nzvimbo iri pamusoro chigaro Racks uye echiShinto paaifamba nechitima mu Europe. Panzvimbo ye akatakura guru uye rinorema sutukezi, unhu lightweight mukwende ndeimwe nzira kurerutsa mutoro wako.
Rongedza zvinhu zvakanaka zverwendo rwekufamba nechitima muEurope
Achifamba nechitima mu Europe anopa shamisa maonero; zvisinei, ipfungwa yakanaka kuunza mashomanana anokosha zvinhu kukubatsira rasai nguva kunyanya kana uri vatanga rwendo anodarika 2 maawa. Verenga bhuku, ona bhaisikopo pahwendefa yako, nyora dzako magazini kufamba kana kutanga kukurukura nomumwe mufambi uye usati munochiziva muchava yako inotevera rwendo.
Zvitima zvakawanda zvine nzvimbo yekudyira, Datenroku ngoro kana tudyo zvingoro vanouya nokutengesa sandwiches, zvinwiwa uye zvakawanda. Asi kana iwe uri munhu zvakasimba anofambira bhajeti kana une chaiyo Mishonga zvinodiwa, kuchenjera kuunza mamwe nezvikafu zvishoma nemi parwendo rwenyu.
Kufunga rokufambira nechitima mu Europe? Enda ku Save A Train paIndaneti kuongorora zvose zvedu oga fares uye kutanga kuronga yako inotevera ushingi!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-tips-for-traveling-by-train-in-europe%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
chitima mazano Train Travel chitima kufamba Mazano traveltips